China Die mgbatị emepụta na suppliers | P&Q
P & Q-ekesịpde anwụ mgbatị factory idu ke Haining, Zhejiang, China.
Anyị bụ ndị ISO 9001: 2015 gbaara aluminum anwụ mgbatị emeputa na specializes na-anwụ mgbatị ọrụ maka ụwa na-eduga ọrụ na ụlọ ọrụ.
Die mgbatị igwe si 200 tọn ~ 800tons. Anyị na-etinye ego na ngwa ọrụ ọhụụ ka anyị nwee ike ịlele nsogbu nke ịga n'ihu na-aga n'ihu ma na-enye azịza kachasị mma maka mkpa ọ bụla nke ndị ahịa anyị.
Anyị bụ ndị ọkachamara na obere-ọkara ogbe ekele anyị tooling ngwa ngwa mgbanwe ahụmahụ. Anyị nwere ike ịnye ngwọta na-ekpuchi mkpa gị na-agbanwe. Ike agbaze ruo 2000 Kg / h. Enweghị nsogbu iji rụọ ọrụ dị iche iche n'otu oge.
P & Q na-ejikwa usoro ọrụ bara uru niile na-enye anyị ohere ịnye ndị ahịa anyị akụkụ ndị emechara nke ọma, dị njikere ijikọ na ngwaahịa ikpeazụ.
Kemgbe 2005 P&Q na-etinye akụrụngwa maka nrụpụta akụrụngwa na nkà ihe ọmụma iji wee meziwanye usoro na nsonaazụ.
Uru nke Die Nkedo
Die mgbatị nwere ike na-emepụta metal akụkụ na mgbagwoju shapes na-eme ya na nso tolerances karịa ọtụtụ ndị ọzọ na uka mmepụta Filiks.
Ọnwụ nkedo na-amịpụta ọnụego mmepụta dị elu dị elu, yana akụkụ nke chọrọ obere ma ọ bụ enweghị ngbacha.
Die mgbatị utịp ke akụkụ ndị na-inogide, dimensionally mụ, na oru ngo obi na-adị na ọdịdị nke àgwà.
Akụkụ ndị nwụworo anwụ nwere ike karịa nkedo nkedo plastik, nke na-enye nkenke ụdị nkenke. Mgbatị mgbidi dị ike ma dị ọkụ karịa nke ndị ahụ nwere ike na usoro mgbatị ndị ọzọ.
Die mgbatị atụmatụ elu ziri ezi na repeatable mmeputakwa nke aghụghọ nke mgbanwe mgbagwoju anya na ọkwa nke zuru ezu.
Ohaneze, ịnwụ nfe na-ebelata ụgwọ site na otu usoro yana usoro nke chọrọ ọtụtụ usoro nrụpụta dị iche. Ọ nwekwara ike ịchekwa ego site na mbenata ihe mkpofu na mkpofu.
Die mgbatị na-arụpụtakarị na ngwa ngwa mmepụta udu ma ọ bụ gbapụrụ ọsọ.
Nke gara aga: Ikanam Street Light-PQSL003
Osote: Ntụtụ plastic